Remubatanidzwa Levamisole bolus 3400mg - China Chongqing Fangtong
remubatanidzwa Levamisole bolus 3400mg
Zvinoumba nerimwe bolus rine Levamisole HCl 2000mg uye Oxyclozanide 1400mg. KUTSANANGURWA LEVAOXYNIDE chinhu blue mavara piritsi nokuda nomumukanwa dosing. Zvairatidza LEVAOXYNIDE chinhu chakarondedzera anthelmintic kushandiswa pakurapa uye kudzora gastro-intestinal uye pulmonary nematode. Noutachiona uye chisingaperi fascioliasis mune mombe. -Lungworms: Dictyocaulus spp. -Gastro-intestinal Makonye: Haemonchus spp, Ostertagia spp.. (Kunze chinovatadzisa Ostertagia mazana mune mombe), Nematodirus spp., Tricho ...
nerimwe bolus rine Levamisole HCl 2000mg uye Oxyclozanide 1400mg.
LEVAOXYNIDE chinhu blue mavara piritsi nokuda nomumukanwa dosing.
LEVAOXYNIDE chinhu chakarondedzera anthelmintic kushandiswa pakurapa uye kudzora gastro-intestinal uye pulmonary nematode. Noutachiona uye chisingaperi fascioliasis mune mombe.??
-Gastro-intestinal Makonye: Haemonchus spp, Ostertagia spp.. (kunze chinovatadzisa Ostertagia mazana mune mombe), Nematodirus spp, Trichostron -.. gylus spp, cooperia spp, Oesophagostomum spp, Bunostomum spp...
LEVAOXYNIDE zvakare anobvisa kwazvo vakakura Fasciola spp., (Flukes) aripo ari bile mutsinga dzinofamba nemukaka chiropa.
Levamisole ndiye laevo-enantiomer ose tetramisole uye chiri anthelmintic imidazothiazole. Hazvina inoshanda pamusoro nomumukanwa yaitonga pamusoro siyana mhando nematodes. Chiito Its anthelmintic kunoratidzwa kuoma honye kuburikidza neuromuscular chinovhiringidza pamusoro depolarising mhando, zvichiita kuti pusa kubviswa honye.
Oxyclozanide ndiko anthelmintic pamusoro salicylanilide boka. Hazvina inoshanda pamusoro Fasciola marudzi, achiita kuti ive uncoupler pamusoro oxidative phosphorylation. Zvingaita kuita pane zvinopfuura imwe nzvimbo kutapudzwa kwevari ATP unoenda metabolic atadze kushanda zvakanaka uye nerufu chisvetasimba.
Levamisole ari nokukurumidza kunyura uye nenhamba yeplasma kuwanda vari runowanika Paavhareji 1 to3 maawa pashure nomumukanwa dosing. Levamisole yava kuparadzirwa kune munyama zvose, apo zvese zviri kanoverengeka kupfuura runoenzanirana yeplasma mumatunhu. Kubviswa kubva yeplasma uye nyama uyewo nokukurumidza chaizvo, chikuru kuchaitwa yenzira ari weti uye bile.
Oxyclozanide zvishoma nezvishoma kunyura pashure nomumukanwa yaitonga pamwe nenhamba yeplasma yomuropa maawa 24 pashure dosing. Excretion iri runonyanya faecal, biliary excretion kuva rinokosha Pamigwagwa kubviswa.
Chipimo chemushonga AND Administration
1 bolus pa 250-300kg muviri uremu.
kungaita neapo manyoka inappetence, frothing, salivation uye kufema nenhamo.
YAMBIRO AND zvokungwarira
- Nokuti kurapa mhuka chete
- Rambai pasigasvikirwi vana.
-3 mazuva nokuti mukaka.
Mazuva -28 zvokudya.
Store mune inotonhorera, yakaoma uye rima panzvimbo pazasi 30 ℃.
5 boli × 12 dzinovhunura / Box.
Next: Remubatanidzwa Multivitamins mahwendefa
10% Levamisole Hcl jekiseni
7.5% 10% Levamisole Hcl jekiseni
Gmp Levamisole Hcl jekiseni
Levamisole Hcl 10% jekiseni
Levamisole Hcl 10% jekiseni Manufacturer
Levamisole Hcl jekiseni
Levamisole Hcl jekiseni 5%
Levamisole Hcl jekiseni For Livestock
Veterinary 10% Levamisole Hcl jekiseni
Veterinary Levamisole Hcl jekiseni